Ambony Ny Ankamaroan'ny Shinoa Malaza Tranonkala Mandarin Faritra Sekoly - Ny Lahatsary Amin'ny Chat Shina
Ambony Ny Ankamaroan'ny Shinoa Malaza Tranonkala Mandarin Faritra Sekoly
Ambony Indrindra Malaza Shinoa Ireo Tranonkala
Inona no vohikala tena malaza indrindra ao Shina? Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia hampahafantatra ny ambony indrindra malaza Shinoa ireo tranonkala
Izany dia manampy ho an'ny vahiny, izay mety te-hiaina ao Shina, nefa tsy fantatro izay habaka mampiasa.
Baidoo -toy ny Google ao Etazonia ny ambony fikarohana ao Shina. Ny fikarohana goavana laharana isa dimy eran-tany amin'ny fifamoivoizana sy ny tranonkala be mpitsidika indrindra ao Shina. Ny olona ny fampiasana ny Baidu mba hahitana bebe kokoa ny tranonkala sy tolotra aterineto. Mampitaha mba hafa Shinoa fikarohana, ny Baidu naka an-tampon'ny tsena amin'ny Sinoa ny fikarohana. Tsy ampiasaina ao Shina, fa koa ampiasaina amin'ny ao Japana, Korea Atsimo, ary Etazonia.
Baidu hahazoam-bola amin'ny alalan'ny fanomezana ny dokam-barotra momba ny vokatry ny fikarohana vokatra.
Robin Li malaza solosaina injeniera ao Shina, niara-nanorina ny Baidu. Amin'izao fotoana izao, ny Baidu manolotra isan-karazany ny asa, toy ny mozika, ny map, ny fifanakalozan-kevitra forum, sary, video, sns, izany no tena soso-kevitra website. QQ dia Shina s vavahadin-tserasera lehibe indrindra amin'ny teny Sinoa ny fampidirana ny vaovao, ny fifandraisana amin'ny fiaraha-monina, ny fialam-boly vokatra sy be-ampiasaina ny filàna fototra. QQ no tena ampiasaina ho toy ny an-tserasera mifampiresaka rindrambaiko izay mitovy amin'ny MSN sy Skype. Ny tranonkala qi koa dia iray amin'ireo ambony nitsidika ny tranonkala ao Shina.
Ny ankamaroan'ny tanora ao Shina mampiasa QQ eo amin'ny fiainana andavanandro.
Misy lalao maro sy ny fitaovana ao amin'ny vohikala ity. Misy olona an-tapitrisany milalao sy miala voly.
Miresadresaka amin'ny alalan'ny QQ iray amin'ireo malaza indrindra ara-tsosialy ny zava-mitranga ao Shina.
Raha ianao dia avy any Shina, dia afaka mahita ny ankamaroan'ny olona no mampiasa azy io amin'ny tranonkala fisotroana kafe. Damping - malaza indrindra ao Shina ny vondrona efaha amin'ny isam-toerana. Izany dia mifantoka amin'ny trano fisakafoanana reviews, toy ny Yelp, ary manana ny fisiany ao mihoatra, tanàn-dehibe manerana an'i Shina. Damping koa dia mandroso tsara ny valisoa sy ny maha-rafitra ihany koa araka ny fanadihadiana sehatra ho an'ny raharaham-barotra tompon'ny ary na dia malaza group-mividy pejy izay mamela ny mpampiasa mba hahazo fihenam-bidy goavana amin'ny trano fisakafoanana raha ireo rehetra mampiasa ny service.
Ny olona rehetra mampiasa Damping vondrona firesahana amin'ny fifanakalozan-kevitra izay ho hanina no tsy misy fiafarana renirano Damping rohy na sary.
Sine, fantatra amin'ny teny Shinoa ho onja vaovao, toy ny Sinoa Yahoo.
Izany no feno tranokala fampahalalam-baovao ao Shina, ny fanomezana ny fialam-boly, vaovao, ny fanatanjahan-tena, ara-tsosialy ny zava-mitranga, ny fianarana, ny fiainana, ny tantara ary mihoatra noho ny an-jatony anatiny ao Shina sy manerana izao tontolo izao. Izany no tena nalaza noho ny fanatanjahan-tena vaovao sy ny zava-nitranga tatitra.
Tena fanatanjahan-tena tia dia ny fahafahana hahazo ny tranonkala isan-andro.
Ankehitriny ny s Weibo(mitovy amin'ny twitter) lasa ny laharana voalohany ao Shina. Ny tranonkala mikendry ny hanome ny feno ny vaovao Shinoa maneran-tany. Youku -toy ny YouTube any Etazonia an-tampon'ny nitsidika ny lahatsary vohikala ao Shina.
Youku - Izany dia midika ara-bakiteny hoe"tsara sy mangatsiatsiaka".
Ianao dia afaka mahita ny ankamaroan'ny horonan-tsary ao amin'ny tranonkala ity ho maimaim-poana. Ny olona mampakatra ny lahatsary sy hizara amin'ny hafa ny olona. Ianao koa dia afaka misintona ny lahatsary tianao ho maimaim-poana. Raha te-mba jereo ny Sinoa sy ny FAHITALAVITRA, ny namany sary tsara indrindra dia Youku. Youku dia laharana eran-tany ny fifamoivoizana sy ny ao Shina. Avy amin'ny FAHITALAVITRA ny sarimihetsika, ny mozika, Youku dia izany sahady ny renirano, toy ny YouTube ao amin'ny U. S, Noho ny zon'ny mpamorona ny antony tao anatin'ny taona vitsivitsy, Youku izao ihany no mamela ny olona ao Shina ny mijery ny lahatsary, izay nitarika ny fikarohana fifamoivoizana mba hampihenana amin'ny alalan'ny. Ny salam-potoana lany ao amin'ny habaka ihany koa nihena, manome video iray hafa vohikala fahafahana mpifaninana amin'i Youku.
Jindong -toy ny Amazon any Etazonia an-tampon'ny nitsidika e-varotra toerana ao Shina.
Jindong no iray amin'ny lehibe indrindra BC mpivarotra an-tserasera ao Shina. Ny Malagasy website, ho an'ny eran-tany ny sambo, nanomboka tamin'ny oktobra. Ny orinasa dia mifototra amin'ny Liu Quandong (a. Richard Liu) tamin'ny volana jolay, sy ny BC sehatra nandeha an-tserasera. Dia nanomboka toy ny an-tserasera magneto-optical store, fa tsy ho ela samihafa, ny fivarotana fitaovana elektronika, ny finday, solosaina, sns. Jindong Mall niova ny sehatra anarana buy tamin'ny volana jona, ary mba JD. Taobao no miantsena an-tserasera toerana ny safidy ho an'ny Shinoa mpanjifa mitady ny fifidianana malalaka, ny lanjany sy ny tsy hanahirana. Izany no malaza indrindra CC (mpanjifa-ho-mpanjifa) tsena an-tserasera ao Shina, mitovy amin'ny eBay. Taobao mamela kely raharaham-barotra sy ny olona nanangana toeram-pivarotana eny amin'ny sehatra, ny vokatra na ny asa fanompoana mpivarotra dia afaka maneho ny zavatra amidy na ny resale ny Taobao fivarotana an-tserasera. Cheap mpanjifa entana dia malaza amin'ny Taobao, ary izany dia ahitana ny zava-drehetra avy akaiky akanjo an-trano entana. Crip ara-bakiteny"handeha lavitra, dia mahasoa sy azo antoka travel namany sary. Manana ny ambony talantalana ny dikan-teny anglisy (ary koa ny anarana, Frantsay, ny Vietnamiana sy rosiana localizations, ankoatra ny hafa), izay matetika no toy izany koa ny vidin-javatra toy ny Sinoa mifanitsy, hafa fahita firy eto Shina. Feng Wenchang dia miorina any Hong Kong ny vondrona na fahitalavitra izay mitana ny miha-malaza website lasibatra voalohany indrindra ao amin'ny Tanibe. Amin'ny ankapobeny tranonkalam-baovao ho an'ny ankamaroan'ny hafa, fang dia nanao inroads ao Shina amin'ny alalan'ny fizarana indraindray mampiady hevitra vaovao sy fomba fijery fa ny mitovy aminy avy any amin'ny Tanibe dia matetika tsy te-rehetra raha tsy misy sary be loatra ny saina na enjehina avy amin'ny manam-pahefana. toy ny Yelp Izany dia ny tsiambaratelo dokam-barotra website. Ny asa dia ahitana ny trano fonenana, ny fitadiavana asa, ny faharoa-tanana ny varotra, lalao, sns. Tena fitaovana ilaina ho an'ny fiainana ao Shina. Dongsheng midika hoe"tanàna"amin'ny teny Shinoa, dia tsara natao ho fitaovana ho an'ny fampifandraisana ny olona monina ao an-tanàna. Ny mpampiasa lahatsoratra listings eny amin'ny tsena nandrakotra ny asa isan-karazany sy ny vokatra ao amin'ny Tranonkalany, ny Orinasa mandrindra ny listings momba ny tsena amin'ny alalan'ny content ny sokajy, tahaka ny asa, trano fonenana, ampiasaina entana, fiara, yellow pages, ny biby fiompy sy ny tapakila, izany dia tsy maka fotoana be na ny ezaka mba hahita izay ilainao sy hahazo ny adiresiny ny ny olona izay manana izany. Ny Orinasa s tsena an-tserasera dia manome fahafahana an-toerana ny mpivarotra sy ny mpanjifa mba mifandray, hizara vaovao sy fitondran-tena raharaham-barotra.
"Ny Fotoana Voalohany mba Matory miaraka amin'ny Lehilahy Shinoa": Sinoa ny Olona Hanokatra ny Momba ny Fiarahana amin'ny any Ivelany ny Vehivavy amin'ny filoha Lefitra. ao Miteny Shina
Cam KRALJESTVU Svetu Klepet na Spletu
ny firaisana ara-nofo lahatsary Mampiaraka toerana mba hitsena ny tovovavy Mampiaraka toerana Fiarahana tsy misy fisoratana anarana miaraka amin'ny finday ny sary olon-dehibe Mampiaraka toerana ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny tovovavy taona amin'ny chat roulette tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana tsy misy lahatsary amin'ny chat amin'ny chat roulette girl free ny firaisana ara-nofo Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana